महिलाहरु किन परपुरुषसँग सेक्स गर्न चाहन्छन् ? यस्तो छ अनौठो रहस्य – Nepal24News
महिलाहरु किन परपुरुषसँग सेक्स गर्न चाहन्छन् ? यस्तो छ अनौठो रहस्य
हाम्रो समाजमा महिलाले एक जना अर्थात आफ्नो श्रीमानसँग मात्रै यौनसम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ । जसका कारण महिलाहरु अन्य पुरुषसँग यौन चहाना राखेपनि समाजले पूरा गर्न दिँदैन् । तर विकसित देशमा यौनसम्बन्ध खुला छ । काठमाडौं डेली जसले जो सँग गरेपनि हुने ।
अध्ययन अनुसार विश्वका कतिपय देशका महिला पुरपुरुषसँगको यौनसम्बन्ध आनन्ददायी हुने बताउँछन् । अध्ययन अनुसार तीनजनामध्ये एकजना महिलाले आफ्नो पूर्व सम्बन्धमा नै सबभन्दा राम्रो सेक्स भएको स्विकारेकी छिन् ।
‘आफ्नो पूर्व प्रेमी नपाएकोमा उनीहरुले कुनै दुःख मनाउ गर्दैनन् तर उनीहरुबीच भएको रमाइलो सेक्सलाई भने मिस गर्ने गर्दछन्,’ कक्सले जानकारी दिइन् । काठमाडौं डेली दुबै महिला पुरुषले सेक्स उमेरसँगै राम्रो हुँदै जाने बताए र मात्र ७ प्रतिशतले आफ्नो पहिलो प्रेम नै सबभन्दा राम्रो प्रेम भएको बताए । धेरैजनाले ‘लभ’ र ‘प्यासन’ ले सबभन्दा राम्रो सेक्स हुने कुरामा सहि मिलाए ।
६२ प्रतिशत महिला र ७१ प्रतिशत पुरुषले आफ्नो वर्तमान पार्टनरसँगको सेक्स सबभन्दा परपुरुषसँगको सेक्स राम्रो रहेको बताए ।
Prevदिमागबाट कसरी निस्कन्छन् यस्ता बकलोल जुक्ती ? हाँसो रोक्न नसकिने तस्विरहरु !
Nextबिहेपछि हनिमुन गएका अजय देवगन यसकारण हनीमुनबाट भागेका थिए, आफैंले गरे यस्तो अनौठो खुलासा